Kitty For Me: September 2008
DBSK ရဲ့ 4th Album နားထောင်ဖြစ်တယ်။ Mirotic တစ်ပုဒ်ပဲ နားထဲစွဲသေးတယ်။ တစ်ခြားသီချင်းတွေ မကြိုက်သေးဘူး။ နောက်မှ တဖြည်းဖြည်းကြိုက်လာမလားတော့ မသိဘူး။ O လောက် မကောင်းသလိုပဲ။ O တုန်းက အဲဒီသီချင်းကို အရမ်းကိုကြိုက်တယ်။ U know က တာလဲ အရမ်းမိုက်တယ်။ အခုလဲ သူတို့ 4th Album ထွက်လာပြီဆိုတော့ Promotion တွေလာတော့မယ်။ Inkigayo, Music Bank တို့မှာ ကြည့်ရတော့မယ်။ :)
01 주문 - MIROTIC [MF]
02 Wrong Number [MF]
03 노을..바라보다 (Picture Of You) [MF]
04 Crazy Love [MF]
05 Hey! (Don't Bring Me Down) [MF]
06 넌 나의 노래 (You're My Melody) [MF]
07 무지개 (Rainbow) [MF]
08 낙원 (Paradise) [MF]
09 악녀 (Are You A Good Girl?) [MF]
10 Flower Lady [MF]
11 잊혀진 계절 (in CD Version only) [MF]
12 Love In The Ice (Korean Version) (in CD Version only) [MF]
Super Show DVD
Super Junior Super Show DVD ထွက်တော့မယ်။ ၁၂၈၀ ဘတ်တဲ့။ ကုန်ပါပြီ ကုန်ပါပြီ။ ဈေးကြီးလိုက်တာ။ ဟီးဟီး ဒါပေမယ့် ၀ယ်ရဦးမယ်။ Seoul မှာ လုပ်ခဲ့တဲ့show ထွက်မှာ။ သူငယ်ချင်းကတော့ yesasia က page ကို တစ်ချိန်လုံးကြည့်နေမှာပဲ။ ထွက်တာနဲ့ ၀ယ်ဖို့ကို...
Posted by Me at 7:01 AM 327 comments:
Super Junior - Fino CF
suju ရဲ့ Fino ကြော်ငြာအသစ်ထွက်လာတယ်။ ထိုင်းကို လာရိုက်ပေးသွားတာ။ Si Won က ထိုင်းလိုပြောတာ တော်တော်ပီတယ်လို့ ထိုင်းစကားကောင်းကောင်းတတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းက ပြောသွားတယ်။ ကျန်တဲ့သူတွေကတော့ ၁၂၃၄ ပြောတာ ပီကြပါတယ်။ :P ။
Fino - Opening
Fino - Can Speak
Fino - Fashion
Fino - Music
Fino - Fitness
Suju M ရဲ့ MV အသစ်ထွက်တယ်။ It's gonna be ME.... really lovely, cute... Suju M ရဲ့ U MV တုန်းကလဲ နေ့တိုင်းနီးနီးကြည့်ဖြစ်တယ်။ :P။ အခု MV လေးလဲ ခဏခဏ ကြည့်ဖြစ်နေတယ်။ SUJU Fan မို့လားမသိဘူး။ သူတို့ဘာလုပ်လုပ်ကောင်းတယ် ထင်တယ်။ :D
Super Junior M - ME
Download part 1[MF] part 2[MF] part 3[MF]
Download part 1[MF] part 2[MF] part 3[MF] part 4[MF]
2AM + 2PM
အခုတစ်လော my favorite playlist ကတော့ 2AM + 2PM လို့ပြောရမယ်။ SHINEE လဲ ကျန်သေးတယ်။ 2AM ကို 2PM ထက်ပိုကြိုက်တယ်။ 2AM က Ballad။ 2PM ကတော့ hot တယ်။ Inkigayo Performances တွေမှာလဲ ကောင်းတယ်။ ဂျွမ်းထိုးတာတွေ မိုက်တယ်။ ရီလဲရီရတယ်။ 2AM ကတော့ သီချင်းအေးအေးလေး။ အသံတွေကောင်းတယ်။ 2AM ရဲ့ Music Video ကို ကြည့်မှ Joo Kwon တို့ ငယ်ငယ်လေးထဲက JYP ရဲ့ training တွေမှန်းသိတော့တယ်။ 2PM MV ကတော့ Hot and Sexy ပဲ။ ကောင်မလေးက လှလွန်းလို့ ၁၀ မှာ ၁၀ အမှတ်ပြည့်ပဲတဲ့။ Performance တွေထဲမှာတော့ ထိုင်းကောင်လေး Nikhun က သိပ်မဆိုရဘူး။ Language အခက်အခဲကြောင့်လားတော့ မသိဘူး။ သူက ကိုရီးယားတွေ ထက်တောင် ချောနေသေးတယ်။
2PM - 10 Points 10
Labels: 2AM 2PM
Shinhee - Love Like Oxygen
Shinee ကတာလေးတွေ ပိုပိုလှလာတယ်။ သီချင်းလဲကောင်းတယ်။ ကတဲ့ စတိုင်လေးတွေ အရမ်းကြိုက်တယ်။ ခြေထောက်ယူတာလေးတွေက သူများနဲ့ မတူဘူး။ သီချင်းလဲ တစ်ခွေလုံး နားထောင်ပြီးပြီ။ မဆိုးဘူး။ အား..Nov မှာ SM Town Concert လာရင် ကြည့်ရဦးမယ်။ ပျော်တယ်။ လက်မှတ်လဲ ရတော့မယ်။
My Wonder Boys' Performance...Especially ... Sung Min..Shin Dong :)
20080907 Inkigayo - Wonder Boys
Download Part 001[MF] Part 002[MF] Part 003[MF] 122 MB
Shin Hye Sung - Because of U
Shin Hye Sung ရဲ့ MV လေးကြည့်ဖြစ်တယ်။ Let's go to the beach ထဲက မင်းသမီးလေး Lee Chung Ah နဲ့။ မင်းသမီးလေးလဲ ချစ်စရာလေး။ Hyesung ကလဲ အရင်လိုပါပဲ။ သူ့ကိုမြင်တော့ Shinhwa ကို သတိရတယ်။ ၁၀ နှစ်မြောက်အခွေသာထွက်သွားတာ အဲဒီအခွေအတွက် promote တွေလဲ မလုပ်ဘူး။ solo တွေပဲ တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် promote လုပ်ကြတယ်။ လုံးဝမမြင်ရတာထက်စာရင်တော့ တစ်ယောက်ချင်းမြင်နေရတာလဲ ကောင်းပါတယ်။
hyesung ရဲ့ ဒီအခွေထဲမှာ Awaken ပြီးရင် ဒီ Because of U ကို ဒုတိယ အကြိုက်ဆုံးပဲ။
Download Part 1[MF] Part 2[MF]
Because of U [Eng Translation]
That has become tears
Is there someone like that in your heart
The one you can't be with
That gave you heartache
Is there somone like that
With all the strength you have inside
The dream that can you not pursue
Have you cried with those thoughts
All the things you have believed in
When that person left
You were left alone
For me, because of you
The place of my heartache
You are one who mended it
I love you even the tears you shed
My heart already knows that I love you
I will support your worn out shoulders
So that you could rest
Look at me with your eyes
Forgetting everything else
Never ever by your side
The steps that have already been taken
Even more because of you
I love you even with all the hurt
My heart will already know if we will separate
I can wipe them
For us, there won't beasecond time
This road won't be here for us
credit to : soompi Shin Hye Sung's Thread .. page 216
Labels: Shin Hye Sung
Super Junior - NII
Suju ကြော်ငြာတွေထဲက အကြိုက်ဆုံးဆိုရင် ဒီကြော်ငြာ ၃ ခုကို ပြရမယ်ထင်တယ်။ အကျီလေးတွေ သိပ်လှတာပဲ။ Snoopy မကြိုက်တာတောင် သူတို့ဝတ်ထားတော့ ကြိုက်သလိုလိုဖြစ်သွားတယ်။ Suju ကလဲ အကုန်ချော နေတယ်။ version ၃ ခုလုံးချစ်စရာလေး။
Super Junior - NII version 1
Super Junior - NII version 2
Super Junior - NII version 3
အခုတစ်လော come back တွေများတယ်။ :P Shin Hye Sung Come Back ! FT Island Come Back ! Younha Come Back !! နောက်ဘယ်သူတွေ ရှိသေးလဲမသိဘူး။ FT Island ကတော့ စပြီးထွက်လာထဲက အခုချိန်ထိ သူတို့ရဲ့ Performance တွေ မရပ်သေးဘူး။ ဆက်တိုက်ပဲ။ တက်တာလဲ အရမ်းမြန်တယ်။
အခု come back မှာ ပုံစံပြောင်းထားတယ်။ Hong Ki က ဆံပင်အတိုလေးနဲ့။ လက်သည်းနီတွေက အနက် နဲ့။ Emo လိုလို ဘာလိုလို :P။ သီချင်းတွေကတော့ ပထမအခွေကို ပိုကြိုက်တယ်။
Lee Hyo Lee - Hey Mr. Big
Lee Hyo Lee - Hey Mr.Big
2AM + 2PM = 1Day
တနင်္ဂနွေနေ့က Super Junior ရဲ့ MBC EveryOne Idol World Show ကြည့်ဖြစ်တယ်။ ဒီတစ်ခါ guest က JYP ရဲ့ 2AM။ စစချင်းကြည့်တုန်းက JYP ရဲ့ production အောက်ကမှန်း မသိဘူး။ 2AM လို့ပဲသိလိုက်တာ။ နောက်မှ soompi ထဲမှာ ကြည့်လိုက်တော့မှ JYP ကမှန်းသိတာ။ Idol World မှာ အရမ်းရီရတယ်။ သူတို့ကို တော်တော်သဘောကျသွားတာနဲ့ သူတို့ first single album ကို နားထောင်ကြည့်လိုက်တာ ကြိုက်သွားတယ်။ အသံလဲ သိပ်မထူးခြားသလို သီချင်းလဲ သာမာန်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သဘောကျတယ်။ ပဲလဲမများကြဘူး။ soompi ထဲမှာ ဖတ်ကြည့်မှ နောက်တစ်ဖွဲ့က 2PM တဲ့။ သူတို့အခွေတော့ နားမထောင်ကြည့်ရသေးဘူး။ အခုပဲ download လုပ်ထားတာ။ အဲဒီထဲမှာ ရေးထားတာက 2AM + 2PM = 1Day တဲ့။ အဲဒီ idea လေးကို ကြိုက်တယ်။
2AM - First Single Album
01. 이노래 [TITLE] (Inorae) [MF]
02. 아니라기에 (Aniragie) [MF]
03. 어떡하죠 (Eotteokajyo) [MF]
01. 10점 만점에 10점 [MF]
02. Only You [MF]
03. Angel [MF]
04. 10점 만점에 10점 (Old School Ver.) [MF]